Posted by ကို Tranquillus | ဇူလိုင်လ 19, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
အလွယ်တကူအလုပ်ရှာမယ့်အရည်အချင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပညာရေးသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းကုန်ကျစရိတ်မကြာခဏအတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းငွေကြေးဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူးနှင့်များစွာသောနေဆဲမသိရပါဘူးသောသူဖြစ်ကြ၏ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းငွေကြေးဖို့ဘယ်လို။ သို့သျောလညျးစိတျအပိုငျး၌ဖြစ်စေအပြည့်အဝသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းငွေကြေးအများအပြားအကျိုးရှိသောအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်မ, သင့်အားထုတ်မှု၌သင်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါရန်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်လွယ်ကူစွာတစ်ဦးရရှိရန်သငျသညျလမ်းပြအချို့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကြံပေးချက်များဖြစ်ပါသည် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ.
အများအပြားအကြောင်းရင်းများ , သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၏ရွေးချယ်မှုတရားမျှတပထမဦးဆုံးကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေလွယ်ကူဖြစ်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့တိကျတဲ့လယ်ပြင်၌ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများတစ်မရှိခြင်းရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘရိတ်နိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များနေပါစေသင့်ရဲ့အလိုက်အထိုက်နေတတ်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဆွဲပါလိမ့်မည်တွေ့ဆုံတဲ့လေ့ကျင့်ရေးမထားပါနဲ့။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း ဒါကြောင့်သူမရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပြီးအထက်သို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ အဆိုပါအပိုဆောင်းလေ့ကျင့်ရေး (ကုမ္ပဏီအတွက်) ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပမှအတွက်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်ညဦးယံအချိန်အတန်းအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအသစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းလညျးမိမိမှတ်ဥာဏ် refresh ရန်, ဖွင့်တိုက်မှအသက်မွေးမှုလေ့ကျင့်ရေးယူနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာကြီးနှင့်နည်းပညာတဦးတည်းဆယ်စုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ပညာသင်ကြားခဲ့သည်ဆိုပါကအထူးသဖြင့် update လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအသိပညာပေါရာဏဖြစ်နိုင်သည်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကနေ့ရက်ကိုမွမ်းမံသင်တန်းပေးခြင်းသည်သူ၏စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးဖို့ဝန်ထမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တိုင်း5နှစ်ပေါင်းအကြံပြုသည်။
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းနောက်ဆုံးတော့ကျအောင်နှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလယ်၌ပြန်လေ့လာမှလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ဧရိယာ၌လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်အကိုင်များကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ပြောင်းလဲခြင်း၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တာရှည်ပေမယ့်အောင်မြင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်လည်းကျေနပ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။
အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်းကိုဘာတန်ဖိုးပေးသင့်သလဲ
အထူးလေ့ကျင့်ရေးအလုပျသမားသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူမှ ADDED တန်ဖိုးကိုဆောင်တတ်၏, ထိုကုမ္ပဏီသည်လည်း၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးရန်အားသာချက်ယူကိုခံယူ။ အလုပျသမား, အလုပ်အကိုင်အလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်း CV ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးပေးပါသည်။ ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်အရည်အချင်းများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးကိုလိုက်နာ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း သင်တစ်ဦးဝန်ထမ်း, အလုပ်လျှောက်ထားသူ, ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏အရာရှိများ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, ဆရာဝန်, လစ်ဘရယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, etc ရှိမရှိပိုကောင်းလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအမြင်နှင့်အတူတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူဖြစ်ပါသည်
တစ်ဘို့ လူကြီးသင်တန်း၏ငွေကြေးအကူအညီတစ်ဦးကအလုပ်ရှာဖွေသူသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း, လက်ခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသိပညာ update လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်အခြားဒေသသို့ပြောင်း။ ယောဘသည်အလယ်ဗဟိုတိုင်ပင်မှူးမတ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေတဲ့အကြီးအအကူအညီနဲ့များမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရှာခြင်း နှင့်အသုံးပြုသူလျှောက်ထားသူကိုလမ်းပြ။
အဆုံးစွန်သောလည်းသူ့ဟာသူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရန်ပုံငွေကိုရှာဖွေဆောင်ရွက်ရန်လိမ့်မည်။ အတွက် ဘဏ္ဍာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအကူအညီနဲ့မြောက်မြားစွာရှိပါသည်။
သငျသညျအလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏ကာလအတွင်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသင်တန်းဝန်ထမ်းရေးရာ (CPF) ရက်နေ့တွင်လေ့ကျင့်ရေးနာရီစုဆောင်းခဲ့ကြပါလျှင်ဒီတော့သင်ကအခမဲ့သင်တန်း၏နာရီမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အခမဲ့အချိန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။
အလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေး (AREF) မှ Assisted ပြန်သွားအလုပ်စင်တာအားဖြင့်အတည်ပြုသည်သင်၏သင်တန်းကိုလည်းဘဏ္ဍာရေးအပိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်ရှာဖွေသူဟာအာကာသနဲ့တန်းတူဖြစ်သည့်ငွေပမာဏသည်သူ၏လေ့ကျင့်ရေး AREF စဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (အကူအညီအလုပ်အကိုင်ပြန်သွားဖို့) နှင့်လစဉ်ပေးဆောင်။
အခြား devices များအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုသူတို့လေ့ကျင့်ရေးရန်ပုံငွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဤရွေ့ကား (အတိုင်) မှာအခြားသူများလိုအပ်ချက်သင်တန်းလှုပ်ရှားမှုန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအကြားပါဝင်သည်, စစ်ဆင်ရေးအတွက်အဘိတ်တစ်ဦးချင်းအလုပ်အကိုင် (POEI), တစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်ရေးမှအကူအညီပေးရေးသင်တန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ (FTA) conventionnées။
သူတို့ RNCP အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အရည်အချင်းများမှဦးဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း (အမျိုးသား Directory ကိုလက်မှတ်) တက်ရောက်ရန်နိုင်အောင်အဆိုပါဒေသဆိုင်ရာကောင်စီအလုပ်ရှာဖွေသူများမှတစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးအကူအညီပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုအပြည့်အဝလေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်မျက်နှာကျက်ကန့်သတ်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီတို့ကထောက်ခံကြသည်။ ဒီအကူအညီကိုလက်ခံရရှိရန်, သင်ဝင်ရိုးစွန်းအလုပ်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နှင့်ဒေသတွင်းနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်းလုပ်သားများ Agefiph နှင့်အမျိုးမျိုးသောဘဏ္ဍာရေးအကူအညီဒေသခံကောင်စီ, က CAF, ခရိုင်ကောင်စီ, အမှုအားဖြင့်အမှုအားဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ခံရရှိသည်။
၀ န်ထမ်းများအတွက်“ Professional Training” ရန်ပုံငွေ
အခြေအနေကတဦးတည်း CDI, CDD သို့မဟုတ်ကြားဖြတ်အစိုးရအားဖြင့်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ "အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း" ရန်ပုံငွေ ၀ န်ထမ်း ၁၀ ဦး ထက်နည်းသောယာဉ်ကုမ္ပဏီများသည်အနည်းဆုံး ၂၄ လ (သို့) ၃၆ လကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်အမြဲတမ်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအတွင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုစီစဉ်ထားပါကသင်၏လေ့ကျင့်မှုအတွက်ငွေကြေးအပြည့်အ ၀ ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ထမ်းသည်ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကာလတိုစာချုပ်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်မှုမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။
ဒါဟာပထမဦးဆုံးမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကအနည်းဆုံး 245လကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရမည်ဖြစ်သည်ကြောင့်လည်းလက်ရှိနှစ်တွင်4လအတွင်းအလုပ်ခဲ့ကြရပါမည်နှင့်နှစ်တွင် CSD များ၏အဆုံးတွင်အောက်ပါ။ ကြားဖြတ်အစိုးရထဲမှာ, ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အာမခံသင်တန်းယာယီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများငွေရေးကြေးရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၎င်းတို့၏ယာယီန်ထမ်းကိုကူညီခွင့်ပြုပါတယ်။
အားလုံးကိစ္စများတွင် CIF (အလုပျသမားတစ်ဦးအကောင့်သင်တန်းဝန်ထမ်းရေးရာ (CPF) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီသင်တန်းအစီအစဉ် (EFP), တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်ရေးခွင့် ), လေ့ကျင့်ရေးခွင့်။ အလုပျသမားသို့မဟုတ်ကြားခံသည်သူ၏ CPF သည်အကောင့်အသိအမှတ်ပြုနာရီအတော်များများရှိပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနေအကြိုးပွုနိုငျ "အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း" ရန်ပုံငွေ သူ၏အလုပ်ရှင်နှင့်% အများဆုံး 50 ဖို့ OPCA အားဖြင့်ပေးဆောင်။
လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင်နေအချိန်ပေါ်ရာအရပျကိုယူစေခြင်းငှါနှင့်လေ့ကျင့်ရေး 60 လအတွင်းထက်ပိုကြာလျှင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်6120 လနှင့်ရက်ပေါင်းအောက်မှာလေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်ကြိုတင်၌သူ၏အလုပ်ရှင်6ကာလ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်အဆုံးစွန်၏တိတ်ဆိတ်ကိုတုံ့ပြန်လျှင်ရန် 30 ရက်ပေါင်းရှိပါတယ်, လျှောက်လွှာကို default အားဖြင့်လက်ခံသည်။ သင်တန်းအလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာရာအရပ်ကိုကြာလျှင်, အလုပ်ရှင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဦး EFP ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်န်ထမ်းများ၏အဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ရေးသေချာစေရန်တစ်ဦးတာဝန်ရှိပြီးကုမ္ပဏီအတွင်းသူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသေချာရပေမည်။ အရှင်အလုပ်ရှင်န်ထမ်းရန်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အလေ့ကျင့်ရေးကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုမဖြစ်မနေမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ကုမ္ပဏီ, အလုပ်ရှင်, ရပ်ရွာသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုမှုမှာပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ CTB အောက်ရှိဝန်ထမ်း (စသည်တို့ကိုနေရာထိုင်ခင်း, ခရီးသွား, အစားအစာ,) မိမိ၏လစာအားလုံးအချိန်ကိုသင်တန်းနှင့်အပိုဆောင်းလေ့ကျင့်ရေးကုန်ကျစရိတ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားအလုပ်ရှင်၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ CIF အတောအတွင်းသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်ပြန်လေ့လာရန်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွက်အလုပ်ခွင်ပျက်ကွက်ခံရဖို့အလုပျသမားမြားအတှကျထားခဲ့ပါသည်။ PFE မတူပဲ CIF အဆိုပါဝန်ထမ်းရဲ့ပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အလုပ်ရှင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းကသူ့ကုမ္ပဏီ၏ထံမှလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလယ်ပြင်၌ဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုပင်လျှင်လေ့ကျင့်ရေးကာလတလျှောက်လုံးကသူ့လစာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လေ့ကျင့်ရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ် batchwise, CIF part- သို့မဟုတ်အချိန်ပြည့်အောက်တွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းလိုပဲ, အလုပျသမားဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်များကလေ့ကျင့်ရေးကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ အရာရှိတွေကလည်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်3နှစ်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ပေးမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းခွင့် (MFF) မှအကြိုးခံစားစေနိုင်သည်။ မိမိအ PSC လည်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်သုံးနှစ်ကထက်ကျော်လွန်နိုင်, ကအားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်အများအပြားသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းကျော်ပြန့်နှံ့စေနိုင်သည်။
သင်တန်းအတွက်တရားဝင်၏ရှေ့မှောက်တွင်စရိတ်များ၏ငွေပေးချေမှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်လစဉ်လတိုင်း check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားငွေပေးချေအချို့သောကိစ္စများတွင်စုစုပေါင်းလုပ်ခပို 85% နေထိုင်စရိတ်ပမာဏ။ အရာရှိတွေကလည်းမှအကျိုးစေခြင်းငှါ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်း၏ငွေကြေး တူညီတဲ့အမျိုးအစား (A, B သို့မဟုတ် C) တွင်အနေအထားအတွက်စပီကာအပြောင်းအလဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, က6လအတွင်းထက်မပိုတစ်ခုငွေပမာဏအတွက်လေ့ကျင့်ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။
ဖတ်ရန် Weelearn ၏ဆောင်ပုဒ်: ကိုကွညျ့ရှုလေ့လာပါ
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးနာရီသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေ့ကျင့်ရေးအကောင့် (CPF) အတွက်နှစ်စဉ်ချေးငွေမှလည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ ဒါ လူကြီးသင်တန်း၏ငွေကြေးအကူအညီ အရည်အချင်းများ၏ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်လက်မှတ်ဆည်းပူး, ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချို့သောသင်တန်းများအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်တရားဝင်တောင်းဆိုချက်ကိုမှာရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မှာသူသည်မိမိအကောင့်တွင်ရှိသူသို့မဟုတ်စီးပွားရေးမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သူတို့ကအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များသင်တန်း၏ဘဏ္ancingာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ AGEFICE မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤဘဏ္financialာရေးအထောက်အပံ့မှအကျိုးရရန်သင်စီးပွားကူးသန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်များတွင် ဦး စွာအလုပ်လုပ်ရမည်။ သင်၏ NAF သင်္ကေတအောက်တွင် URSSAF တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ရန်ပုံငွေရရှိရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများသည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၂,၀၀၀ ပေးသည့်လေ့ကျင့်ရေးအခကြေးငွေမှအကျိုးခံစားရမည်။
ပုဂ္ဂလိကယောဂီအဘို့, FAF-pm တွင်အာမခံရံပုံငွေသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေးလူမှုရေးလုံခြုံရေးနှစ်ပတ်လည်မျက်နှာကျက်၏% 0,15 အထိဆရာဝန်တစ်ဦးအခကြေးငွေလိုအပ်သည်။ ဆရာဝန်များဆက်လက်ဆေးဝါးကုသမှုပညာရေး (CME) ၏အသင်းအဖွဲ့များဤကြေးအခမဲ့အုပ်စုသည်လေ့ကျင့်ရေးမှတဆင့်ကိုလိုကျနာနိုငျသညျ။ အဆိုပါ FAF-pm တွင်လည်းဆရာဝန်တစ်ဦးလျှင်တစ်နှစ်လျှင် 420 ယူရိုအထိတစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်ရေးကိုလိုက်နာလိုသောအဆိုပါဆရာဝန်ကူညီပေးသည်။ အဆုံးစွန်သောထို့နောက်သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတိုင်းလိုက်နာတစ်ခုသို့မဟုတ် du, စွမ်းရည်ပြင်ဆင်နေပါလိမ့်မယ်။
အခြားလစ်ဘရယ်ပညာရပ်များအတွက်၎င်းတို့သည်လစ်ဘရယ်ပညာရှင်များအတွက် Interprofessional ရန်ပုံငွေ (FIF-PL) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်အနေဖြင့် URSAFF တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဤငွေကြေးအကူအညီမှအကျိုးခံစားရရန် NAF ကုဒ်တစ်ခုရှိရမည်။ အဆိုအရ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတစ်ဦးကကော်မရှင်သည် FIF-PL အတွင်းသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းများအတွက်အကူအညီချထားပေးသို့မဟုတ်မများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားတဲ့ခန့်မှန်းချက်များကလိုက်ပါသွားရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ website တွင်တောင်းဆိုချက်တစ်ခု, လုပ်ရပေမည်။ လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအရန်ပုံငွေရှာခြင်းအမှုအားဖြင့်အမှုပြုမိသည်။
အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်ပြပွဲနည်းပညာရှင်တစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်ရေးခွင့် (CIF) အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်နှင့်တစ်ဦးခံစားနိုင်ခြင်းရှိမရှိပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ရန်ပုံငွေလေ့ကျင့်ရေးကူညီပေးသည်။ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေသည်အလုပ်လုပ်သည့်အချိန်ပေါ် မူတည်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအာမခံ (AFDAS) သည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၏လစာကိုအနည်းဆုံးလုပ်ခ၏ ၁၅၀% ထက် နည်း၍ သို့မဟုတ်ညီမျှပါကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအားရန်ပုံငွေရရှိရန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးစရိတ်အားလုံးကိုကာမိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကို CIF နှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပါကသူသည် ဆက်လက်၍ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း၏အဆင့်အတန်းနှင့် AFDAS မှပေးလိမ့်မည်။
ဘဏ္ဍာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေး, လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန် သြဂုတ်လ 16th, 2018Tranquillus
အောက်ပါGoogle တွင်သုတေသနမြန်ဆန်အထိ Get